Redeem your rewards / COVID-19 Updates and Information - State of Minnesota
Waad ku mahadsan tihiininaad ka qaybqaadataan Barnaamijka Ku guulayso Abaalmarinta Tallaalka!
Mahadsanid! Waxaad u bilaabaysaa xagaaga si wanaagsan waxaadna hadda u diiwaan gashan tahay helitaanka abaal marin qayb ka ah Ololaha Talaalkaaga xagaaga! (Your Shot to Summer!)
Waxaad heli doontaa iimeelka xaqiijinta ah 24 saac gudahood kadib markaad gudbiso codsigaaga abaal marinta. Haddii aadan helin iimeelka xaqiijinta ah - ama haddii aad hesho iimeelka xaqiijinta iimeelka ciwaankaaga iimeelkuna uu khalad yahay - fadlan wac Laynka Dadwaynaha ee COVID-19 MDH lambarka (833) 431-2053 Isniinta ilaa Jimcada 9 a.m. - 7 p.m. iyo Sabtida 10 a.m. - 6 p.m.
Waxaan ka shaqaynaynaa codsiyada waxaana xaqiijinaynaa xogta talaalka, waxaana soo saari doonaa abaal marinnada ugu badan labo asbuuc gudahood markaad isdiiwaan geliso. Kaararka fiisada ayaa qaadan kara afar asbuuc in la raro. Kiisaska qaarkood, waxaad xog ka helaysaa Gobalka Minnesota si loosoo gabo-gabeeyo xogta. Abaal marinnada waxaa lagu bixinyaa qaababka soo socda:
Tigidh Gelitaanka Great Lakes Akuwaariyam
Aquarium-ka ayaa tikidhada u diri doona dadka reer Minnesota ee doorta qaabkaan.
Tigidh Gelitaanka Mall of America Nickelodeon Universe
Mall of America ayaa iimayl ugu diri doona macluumaadka ku saabsan sida loo furto kaaraarka oggolaansha ee reer Minnesota oo doorta qaabkaan.
Rukhsadda Gawaarida Jardiinooyinka ee Gobolka Minnesota
Dadka reer Minnesota waxay boosto ahaan ka heli doonaan warqada ogolaanshaha Bakimada Gaadiidka dhanka Waaxda Kheyraadka Dabiiciga ah.
Laysanka Kalluumaysiga Minnesota
Waaxda Khayraadka Dabiiciga ah ayaa ku wargelin doonta reer Minnesota inay dhammaystiran codsiyadooda laysanka ama shatiga kalluumaysiga.
Tigidh Gelitaanka Beerta Xayawaanak ee Minnesota
Beerta xayawaanka ee Minnesota ayaa iimayl ugu diri doonta macluumaadka si dadka reer Minnesota ay u furtaan oggolaanshahooda.
Tigidhada Horyaalka Beesboolka ee Northwoods
Reer Minnesota waxay soo wici doonaan xafiiska tigidhada waxayna siin doonaan magacyadooda dhammaystiran iyo cinwaanadooda si loo xaqiijiyo inay boos ku qabsadaan tikidhkooda. Fadlan wac hal isbuuc kadibb marka aad isu diiwaangeliso barnaamijka Ku guulayso Haddiyada Tallaalka.
Tikidhada Bandhigga Gobolka
Bandhigga Gobolka ayaa iimayl ahaan ku soo diri doona tigidhada ugu dambayntii Luulyo 16,2021.
Tigidhka Martida ee Valleyfair
Waaxda Caafimaadka ee Minnesota waxay ku bixin doontaa lambar gaar ah iimayl ahaan si ay reer Minnesota u furtaan kaarka.
Dadka reer Minnesota ayaa heli doona kaarka oo lagusoo diraayo boostada kana imaanaaya adeeg bixiyaha Gobalka Minnesota. Kaararka fiisada ayaa qaadan kara afar asbuuc in la raro. Ogoow: Kaararka Fiisada lama keeni doono Sanduuqyada Boostada. Haddii aad doorato kaarka fiisada aadna ku qorto in Boostada (PO Box) ahaado ciwaankaaga boostada, waan kula soo xariiraynaa si aad noo siiso ciwaan guri rasmi ah ama inaad doorato qaab kale oo abaalmarinta laguu soo marsho.
Waad ku mahadsan tihiin inaad qaadateen tallaalka! Tallaal kasta wuxuu ballaarinayaa, ilaalinta bulsha ee aan u baahannahy si aan u badbaadinno nafteena iyo kuwo kale oo kuu sugan Minnesota guud ahaan. Haddii aad qaadatay kuurada koowaad ee tallaallada Pfizer ama Moderna, fadlan xusuusnow inaad qaadato kuurada labaad wakhtiga loogu talogalay. Haddii aad u baahato inaad qabsato ballanta kuurada labaad, booqo mn.gov/vaccine si aad u hesho adeeg bixiye kuu dhow.